UYIPEYINTA NJANI IWINDOWSILLS KUNYE NEWINDOWS WINDOW - IIPROJEKTHI ZASEKHAYA
Amaxabiso AmananiAmaxabiso Amanani
Iiprojekthi ZasekhayaIiprojekthi Zasekhaya
Amaxabiso Amanani Iiprojekthi Zasekhaya Uhlobo Ukuphila Izindlu Ezithengiswayo Lungelelanisa Kwaye Ucoce Iindaba Ekhaya Ukhenketho Umthetho Wabucala
Uyipeyinta njani iWindowsills kunye neWindows Window
Ukuphinda ndibuyele efestileni kwandenza ukuba ndibeke kuluhlu lwezinto ebendiza kuzenza ngexesha lonyango lukaJanuwari, ndaye ndagqiba kwelokuba ndijongane nalo kule mpelaveki iphelileyo. Emva kweeyure ezimbalwa zokukhuhla kunye nokupeyinta, ifestile yam ijongeka intle. Apha ngezantsi kukho inyathelo ngenyathelo lesikhokelo esibonakalayo sento endiyenzileyo:
Gcina Ncamathisela Bona eminye imifanekiso
(Ityala lemifanekiso: Unyango lweNdlu)
Ingaba ufuna ntoni
Iphepha leSanti ePhakathi
Isiponji okanye iRag
Kuqala (andikhange ndisebenzise VOC)
Ipeyinti yeSemi-Gloss (Khange ndisebenzise VOC)
Indebe yepeyinti (bendisebenzisa izikhongozeli ezindala zeyogathi)
Isi-5 – ku – 1 Isixhobo sePeyinti okanye iPutty Knife (Ndisebenzise 1.5 ″ Stiff Putty Knife)
Ibrashi yePeyinti ye-Angle
Ingelosi inombolo 1010 doreen isidima
1. Beka ilaphu elahlayo phambi kwefestile, uze ususe ipeyinti endala kangangoko unako ngesikratshi.
Ndisebenzise imela ye-putty, kodwa isixhobo se-5-in-1 somzobi siza kusebenza, naso. Isakhelo sefestile sam besingaxoli, ke ndisuse kuphela ipeyinti esillini.
Qaphela: Susa kuphela ipeyinti evulekileyo. Musa ukunyanzela ipeyinti.
2. Gcwalisa nayiphi na imingxunya ngesixhobo, kwaye uyivumele ukuba yome ngokupheleleyo.
Qaphela: Okuncinci kuninzi. Faka isixa esincinci se-spackle ngexesha; ungasoloko usisebenzisa ngakumbi kamva.
3. Hlaba iindawo ezihlengahlengisiweyo ngokugudileyo ukuze zigungxule isill eseleyo, kunye nesanti efestileni nakwisakhelo sefestile ukulungiselela ukupeyinta.
Qaphela: Kuba bekungafuneki ukuba ndizikrobe iifreyimu zeefestile, ndiyilungisile indawo epeyintiweyo ngokuyixakatha kancinci de iphele; oku kuya kunceda intonga yokupenda entsha.
4. Coca iifestile kunye nesakhelo.
Ndisebenzise iviniga kunye namanzi ukucoca umphezulu nokususa uthuli.
Ukhetho: ukuba unewindows yoyilo, oku kuya kuba lixesha elifanelekileyo lokubamba.
(Ityala lemifanekiso: UMichael wafunda )
5. Tape ujikeleze indawo oceba ukuyipeyinta.
6. Usebenzisa ibrashi yeengile, qala iinkuni eziluhlaza kwaye wome ngokupheleleyo.
Ngenxa yokuba nditshitshise ifestile kuphela, khange kufuneke ndibeke kuqala isakhelo sefestile.
Qaphela: ibrashi ye-engile yenza ukuba kube lula ukungena kwii-nooks kunye neekhrannies zefestile kunye nokucheba.
Intsingiselo ye1: 11
7. Emva koko, peyinta ifestile kunye nefreyimu yefestile.
Qiniseka ukuba usebenzisa ipeyinti eyomeleleyo nekulula ukuyicoca. Ndisebenzise ipeyinti eseleyo eseleyo ukusukela xa ndandipeyinta igumbi lam lokuhlambela.
Qaphela: Ndiyathanda ukuthulula ipeyinti kwi-yogurt endala okanye kwizikhongozeli zokhilimu omuncu ukwenza umsebenzi ulawuleke ngakumbi. Ngenxa yokuba ezi ziqulatho zineziqhekeza, ungagcina ipeyinti ukuze uchukumise ngokukhawuleza xa ubona indawo efuna ukuhoywa kamva emini.
8. Susa iteyiphu uyeke ipeyinti yome.
9. Nantso ke! Kulungile njengokutsha.
UKUZOLEKA OKUNGAKUMBI KWIPHEPHA LOKUSEBENZA:
• Iingcebiso ezingama-40, amaQhinga, kunye neeProjekthi ngePeyinti
• Iingcebiso ezili-10 ze-No-Mess Paint
• Iingcebiso zokuCoca ngokuKhawulezayo kwiiprojekthi zokupeyinta
(Imifanekiso: Kate Legere)
Unyango ngonyango lwegumbi lokuhlala ukusukela ngo-2011, uKate ujolise ekubhaleni kwakhe ngokuphila okuluhlaza kunye noyilo. Ngoku uhlala eFiladelfia kwaye uthanda ukuhamba ngeebhayisikile, ikofu enomkhenkce, kunye nokulala.
Uyenza kanjani indlela yakho yoMkhosi weAmmo Box Boombox
Into endinqwenela ukuba ndiyifumene ngaphambi kokuba ndijonge ukuThengisa ukuBhengezwa
Izigidi zeKhandlela zeKrisimesi zijongwe ngqo kwiLandfill kule Nyanga
I-1,000-Square-Foot-Modern House Pool House eyinyani yeyindlu yam yamaphupha
Ngaba ukuHamba kwamandla elanga kunokuHlawula? Omnye umninikhaya uhlahlela amanani okwenyani
Ukuhlaziya indawo yakho yokuwa-kwaye ugcine iipesenti ezingama-40 ngeeRugs ezithengisa kakhulu kwi-West Elm
Izinto ezili-11 ekungafuneki ukuba uzenze kwindlu evulekileyo
Imiyalelo eli-10 yokuhombisa irente yakho
Akuzange kube lula ukuthenga okanye ukuthengisa indlu kwi-Intanethi. Kodwa Ngaba Ufanele?
Ukuyila igumbi lokuhlamba iimpahla? Musa ukulibala Ezi zinto 9
Lungelelanisa Kwaye Ucoce
Cinga i-SF yokuthengisa izindlu nomhlaba ngaba yoyikisa? Esi Sixeko Side Simbi
Ukuba awunayo iPatio eVihliweyo, Esi sihlalo soMiyane oClever yeyona nto ilandelayo
Ubungqina bokuba sonke sisebenzisa iMidlalo yeGienga enkulu njengeeTafile ezisecaleni
Intengiso yeWayfair's Black Friday: Ukukhetha kwethu ezona Zithembiso zibalaseleyo
Uluntu Kwindlela Yobomi Kunye Noyilo Lwangaphakathi. Intsingiselo Yokomoya Yenani Lengelosi.
Iyintoni intsingiselo ye-11: 11
Iyintoni intsingiselo ye999
I-222 ithetha inani leengelosi
Iyintoni intsingiselo ye-7 11
Intsingiselo yokomoya inombolo 10
umele ntoni 11 11
lithetha ntoni ishumi elinanye elinanye?
Copyright © 2021 Onke Amalungelo Agciniwe | hotelleonor.sk | Umthetho Wabucala